J. Hoose oo 3-1 uga badisay xulka Sanaag iyo Baay oo 3-0 ku caraabisay xulka Galgaduud. – Radio Daljir
Diseembar 25, 2010 12:00 b 0
Garowe, Dec 25 – Waxaa maanta dhacay ciyaarihii ugu dambeeyey ee wareega 1-aad ee ciyaaraha gobollada Somaliya. Ciyaaro aad u xiisa badan ayaa dhex maray xulalka Sanaag v J. Hoose iyo Baay v Galgaduud ee kooxda D.
J. Hoose v Sanaag (3-1)
Ciyaarta 1-aad ayaa dhex martay xulalka J. Hoose & Sanaag. Ciyaarta oo ahayd mid aad u adag ayaa ku dhamaatay 3-1 oo ay guushu ku raacday xulka J. Hoose. Xulka J. Hoose ayaa u gudbay wareega 2-aad ee ciyaaraha, halka gobolka Sanaag ay ku hareen wareega 1-aad.
Baay v Galgaduud (3-0)
Ciyaarta 2-aad oo ahayd ciyaar hal dhinac, oo gebi ahaan ciyaartana ay ku gacan sareeyeen ciyaartoyda gobolka Baay, ayaa dhex martay xulalka Baay v Galgaduud.
Xulka Baay dhaliyey 3 gool oo xarago leh, abuurayna fursado kale oo ay ku garaaceen goolka Galgaduud.
Ciyaarta ayaa ku dhamaatay 3-0 oo ay guushu ku raacday gobolka Baay. Xulka Baay ayaa u gudbay wareega 2-aad, halka xulka Galgaduud ay ku hareen wareega 1-aad ee ciyaaraha.
Berri oo bisha December ay tahay 26 ayaa waxaa bilaaban doona wareega 2-aad (Quarter finals) ee ciyaaraha gobollada Somaliya.
Gobollada u gudbay wareega 2-aad ayaa kala ah:
Bari, Sh. Dhexe.
J. Hoose, Baay.
Isu-duwaha wasaarada caafimaadka ee gobolka Mudug oo is-casilay, kuna saleeyey is-casilaadiisa ku xad gudub borotakool.